La Grande Braderie de Madagascar : homen-danja ny fitaovan’ny mpianatra (NewsMada) | AEMW
La Grande Braderie de Madagascar : homen-danja ny fitaovan’ny mpianatra (NewsMada)
Hotanterahina ny 31 aogositra ary tsy hifarana raha tsy ny 4 septambra izao ny hetsika ara-barotra La Grande Braderrie de Madagascar (GBM) izay karakarain’ny orinasa Madavision etsy amin’ny lapan’ny Kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina.
Hanjaka ny tolotra ara-barotra eo amin’ny kojakojam-pampianarana mandritra ny dimy andron’ny hetsika. « Tanjona ny hitsimbinana manokana ireo ray aman-dreny amin’ny fiatrehana ny fidiran’ny mpianatra », hoy ny mpikarakara, Ramanantsoa Harilala.
Manodidina ny 300 ny tranoheva hampiseho ireo karazana fitaovam-pianarana. Mampiavaka ny hetsika GBM ny fihenam-bidy izay efa andrandrain’ny mpiantsena efa zatra ity hetsika ity.
Ankoatra ny kojakojam-pianarana anefa, ho tazana ao anatin’ny tsenabe ihany koa ireo karazana akanjo sy kiraro vaovao ho an’ny ankizy entiny mianatra. Tsy ho diso anjara akory ny lehibe fa hahita izay tadiaviny ihany koa na ny lehilahy na ny vehivavy.
Eo koa ny kojakojan-tokantrano izay mahasarika ny andriambavilanitra, ny kojakojana fiara ho an’ny lehilahy ary ny karazan-damaody ho an’ny tanora. Hahazo vahana ihany koa ny vokatra malagasy izay efa mahazatra ny orinasa Madavision ny manasongadina azy.
← Lalàn’ny fifandraisana sy ny serasera – Hoy ireo mpanao gazety sasany : (NewsMada)
Fanadiovana an’Antananarivo : ho hentitra andro aman’alina ny kaominina (NewsMada) →